Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Koety » Kuwait dia mandrara ny olom-pirenena tsy vita vaksiny mba tsy hiala ny emirata
Ny olom-pirenena Koesiana izay nahazo tifitra vaksinin'ny COVID-19 ihany no avela handeha any ivelany
Koetyite tsy vita volo dia tsy afaka mivezivezy any ivelany
Hisy lalàna vaovao hanan-kery amin'ny 22 Mey
Kouwaita avy amin'ny sokajin-taona izay tsy mahafeno fepetra hahazoana COVID-19 dia tsy hisy fiantraikany amin'izany
Nanambara ny kabinetran'ny governemanta Koesiana fa ny olom-pirenena Koesiana izay nahazo tifitra vaksinin'ny COVID-19 ihany no avela handeha any ivelany, raha Koetyite tsy vita volo no voatery mijanona ao amin'ny emirata.
Hisy lalàna vaovao hanan-kery amin'ny 22 Mey KoetyMinisitry ny fampahalalam-baovao, Koety avy amin'ny sokajin-taona izay tsy mahafeno fepetra hahazoana COVID-19 tifitra dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fameperana vaovao.
Koety, izay misy mponina maherin'ny 4.4 tapitrisa, dia efa nahavita vaksiny mihoatra ny 1.1 tapitrisa dôly, hoy ny angon-drakitra World Health Organization. Jabs roa - ireo novokarin'ny Pfizer-BioNTech sy AstraZeneca - dia voasoratra anarana hampiasain'ny firenena manankarena solika.
Tany am-piandohana ny fandrarana tsy hidirana ho an'ny olom-pirenena tsy Koesiana dia mbola mijanona eo, toy izany koa ny didy navoakan'ny volana aprily mba hampiatoana ny sidina rehetra avy any India noho ny firongatry ny aretina any.
Koety dia izy tenany ihany no nahita fiakarana tranga trangana virus coronavirus isan'andro tamin'ny volana voalohan'ny taona, ka olona 1,300 1,500 ka hatramin'ny XNUMX no tratran'ny aretina isan'andro.
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana dia olona 276,500 19 any Koety no nosedraina ho COVID-1,600. Ny emirate dia nanoratra fatin'olona efa ho XNUMX mifandraika amin'ny coronavirus.